के मानवता हराएकै हो त ? - nepnews
कोरोना भाईरसका कारण विश्वका विभिन्न ठाँउ त्रसित भइरहेको बेला अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्य अछुतो रहन सकेको छैन् । सरकारले ‘स्टेट अफ डिज्यास्टर’ भनेर घोषणा गरेसगैँ स्टेज-४ लकडाउन सुरु भएको छ । दिनदिनै कोरोना संक्रमित बढेसँगै स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको भिक्टोरिया राज्यमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै मानवता भने हराइरहेको देखिन्छ ।
भाईरसले रंग, जात, धर्म र समुदाय चिन्दैन तर के हामी एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई चिन्दैनौँ र? विदेशको ठाँउ, घर परिवारबाट टाढा रहेका कतिपय नेपालीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ र कतिले खुला रुपमा व्यक्त गर्नुभएको छ भने कतिपयले व्यक्त नगरेतापनि उपचारविधि अपनाएर, सबै प्रक्रिया पालना गरेर आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । आफुलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ भनेर भन्ने या नभन्ने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर अरुलाई संक्रमण नसरोस् भनि सावधानी अपनाएर बस्नखोज्दा पनि बसीखानै नदिनु, छीछी: दुर्दुर गर्नु र मानसिक तनाब दिनु, कस्तो मानवता हो?
विदेशी भूमीमा पढाई र कामको सिलसिलामा अस्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुले आफ्नै घर किनेर बस्नु कठिन र असम्भव कुरा हो त्यसैले भाडामा घर लिनु र कोठा सेयर गरेर बस्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा घरमा सगैँ बसेको कुनै व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखियो भने उसलाई घरमा पस्न नदिनु, खान नदिनु अथवा सबै सामान बन्द गरेर बिरामीको बेवास्ता गरि आफु घरबाट निस्कनु कस्तो नैतिकता हो? एकपटक आफुलाई वा आफ्ना परिवारलाई त्यो संक्रमित व्यक्तिको ठाँउमा राखेर हेर्नुस् त ? यदि आफ्नो परिवारमा संक्रमण देखिएको भए के तपाई यस्तै गर्नुहुन्थ्यो ? अथवा आफू संक्रमित भएको भए यो सबै सहन सक्नुहुन्थ्यो ?
डर लाग्नु स्वभाविक हो तर सावधानी अपनाउने तरिका पनि छन् । सम्बन्ध बनाउन रगतको नाता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन व्यवहारिक नाताले बनेका कतिपय सम्बन्धहरु अनन्तकालसम्म अमर रहन्छन् । त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा गासिँएको सम्बन्धलाई फुटाउन भन्दापनि जुटाउन तर्फ लागौँ । आज उसलाई पर्दा तपाईले सहयोग गर्नुभयो भने कुनैदिन तपाईलाई पर्दा उसले सहयोग गर्नेछ । सकेसम्म सहयोग गरौँ, एउटै घरमा बस्न समस्या भए वैकल्पिक व्यवस्था खोजौँ तर संक्रमितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगरौँ । यदि संक्रमितको लागि केहि गर्न सकिन्न भने थोरै भएपनि मानवता साचेर भिक्टोरियाको स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागमा सहयोग माग्नुहोस् । (Link : https://www.dhhs.vic.gov.au/)
कोरोना परीक्षण गरेका र संक्रमण देखिएका बिरामीको मनोबल घटाउनु अघि याद राख्नुस् परीक्षण गराउने र नगराउने बराबर जोखिममा छौं । कोरोना टेस्टमा पोजेटिभ देखिएका बिरामीलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न दिऔँ । कोरोना संक्रमणबाट आफुपनि बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ ।
अत्यावस्यक कामबाहेकका लागि दूतावास नजान अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासको आग्रह
Nepnews March 18, 2020
अष्ट्रेलिया अध्यागमनले चेक जाँचमा कडाइ गर्दै, के-के लैजान पाइन्छ ?
Nepnews May 2, 2019
डढेलोका कारण अस्ट्रेलियामा ५० करोड जनावर नष्ट
Nepnews January 6, 2020
बार्टी र केनिन अष्ट्रेलियन ओपनको सेमिफाइनलमा
Nepnews January 28, 2020
सिंगलेटन एक घरमा आगलागी, तीन बालबालिकाको मृत्यू
Nepnews June 26, 2019